Human Library (Working at MNCs)
01/12/2018 Offline Event
***FREE OF CHARGE. Registration required.***
နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများမှာ အလုပ်ဝင်ခြင်း - empowered by Wynee’s Human Library Series
နာမည်ကြီး နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာ အလုပ်လုပ်ရတာ ဘယ်လိုနေမလဲ တွေးကြည့်ဖူးပါသလား?
ခေါင်းဆောင်မှုနေရာ ရောက်လာဖို့ ဘယ်လို အရည်အသွေးတွေ ပျိုးထောင်ဖို့လိုမလဲ သိချင်ပါသလား?
MNC တွမှာ လက်ရှိ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ခါင်းဆောင်တွေ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေနဲ လူချင်းတွေ့ ဆွးနွေးဖလှယ်ပြီး အိုင်ဒီယာတွေ၊ အလုပ်အကိုင် အကြံပြုချက်တွေ ရရှိနိုင်ဖို့ ၊ MNCကုမ္ပဏီတွေ ဝန်ထမ်းခေါ်ပုံ၊ ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်ပုံတွေ အကြောင်း သိနိုင်ဖို့ ဝိုင်း ရဲ့ HumanLibrary မှာ ပါဝင်လိုက်ပါ။
Human Library ဆိုတာ ဘာလဲ?
Human Library ဆိုတာ မြန်မာလူငယ်များ (Readers/စာဖတ်သူများ)အတွက် Community မှ ခေါင်းဆောင်များ။ အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်များ (Books/စာအုပ်များ)နှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေးခွင့် ရှိမည့် နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
သမရိုးကျ ဟာပြောပွဲ ပုံစံမျိုး မဟုတ်ပဲ speaker တွနဲ့ တက်ရောက်သူတွေ တိုက်ရိုက် မးမြန်း ဆွးနွေးရမဲ့ အစီအစဉ် ဖစ်ပြီး လူဦးရေ ကန့်သတ်ချက် ထားရှိတာမို့ Registration Link https://bit.ly/2Fn8HlY ကနေ တက်ရောက်ဖို့ အမြန်ဆုံး စာရင်းပေးသွင်း လျှာက်ထားနိုင်ပါတယ်။
Human Library မှာ ပါဝင်နိုင်ဖို့ Registration Link https://bit.ly/2Fn8HlY ကနေ စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။ ဒီပွဲအတွက် ဝင်ကြေး တစုံတရာ ကာက်ခံခြင်းမရှိပါ။
နေ့ရက် - ၁.၁၂.၂၀၁၈(စနေ န့)
အချိန် - နံနက် ၁၀နာရီ မှ ၁၂နာရီ
Paul Nyan Myint Soe @ Paul
Senior HR Business Partner Manager (Unilever EAC Myanmar Co., Ltd.)
Paul Nyan Myint Soe က Unilever EAC Myanmar Company Limited မှာ Senior HR Business Manager အဖြစ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီလို Human Resource Management နယ်ပယ်မှာအလုပ်မလုပ်ခင် Samsung နဲ့ Telenor စတဲ့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေမှာလဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးဘွဲ့ကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကနေရရှိခဲ့ပြီး Public Administration (မဟာဘွဲ့)ကိုရန်ကုန်စီးပွားတက္ကသိုလ်ကရရှိခဲ့ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး Paul Nyan Myint Soe က မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို တွဲဖက်စီမံရင်းကတစ်ဆင့်စီမံခန့်ခွဲမှု အရည်အချင်းတွေကိုပျိုးထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် INGO ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့အစည်းနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာမှာရှိတတ်တဲ့ ဘာသဘာဝနဲ့မတူညီတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ လူတွေကိုစိတ်ဝင်စားပြီး အသိုက်အဝန်းတစ်ခုမှာနေရတာကိုနှစ်ခြိုက်လို့ပဲ HR Management ကိုအလုပ်အကိုင်တစ်ခုအနေနဲ့ ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ UN မှာအလုပ်လုပ်နေရင်း HRM နယ်ပယ်မှာခြေလှမ်းစခဲ့တာဖြစ်ပြီး Non-profit organization တွေမှာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံက ၁၀နှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။
Non-profit အပိုင်းမှာ ၁၃ နှစ်ကြာကျော်ဖြတ်လာပြီးနောက် HRM နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသိပညာဗဟုသုတတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေကိုအသုံးချဖို့၊ ပိုပြီးကျယ်ဝန်းတဲ့ HRM networkရဖို့ စီးပွားရေးနယ်ပယ်ဘက်ကိုပြောင်းခဲ့ပါတယ်။
Paul Nyan Myint Soe ကသူ့ရဲ့HR အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ အခု HR နည်းဗျူဟာချခြင်း၊ အကြံပေးခြင်း၊ တခြား stakeholder တွေနဲ့ပူးပေါင်းခြင်းတွေက်ိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး သူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ organization ကို အကျိုးများစွာယူဆောင်လာနိုင်တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Strategic Sourcing and Procurement Professional (Grab Country Office, Myanmar)
'ဝိုင်း' ရဲ့ Human Library မှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးမဲ့ နောက်ထပ် Speaker တစ်ဦးကတော့ Grab မှာ Strategic Sourcing and Procurement Professional အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသူ ကိုလူမင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရောဂျက် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ နည်းဗျုဟာမြောက် ဝယ်ယူမှုများ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ငွေကြေး စီမံမှု၊ လူထု ဆက်ဆံရေး အပါအဝင် လုပ်ငန်းကဏ္ဍများစွာကို ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Grab မှာ မလုပ်ကိုင်ခင် UNAIDS၊ Destination Asai ၊ Telenor Myanmar တို့မှာလည်း အတွေ့အကြုံ များစွာ ရှိထားသူ တစ်ဦးပါ။ ရန်ကုန်အဝေးသင် တက္ကသိုလ်၊Center for Vocational Training (CVT) တို့မှာ ပညာသင်ကြားခဲ့တဲ့ အပြင် KV Zürich Business School (Switzerland) မှ Advanced SME Development/Management အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်လဲရရှိထားပါတယ်။
HR Director (shop.com.mm)
ဝိုင်း ရဲ့ Human Library မှာ ပါဝင်ဆွေးနွေး ပေးမယ့် နောက်ထပ် Speaker တစ်ဦးကတော့ နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းစု Alibabaမှာ အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ Shop.com.mm ရဲ့ HR Director အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေသူ မရည်မွန် ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်က Digicel Myanmar ၊ Ooredoo Myanmar နဲ့ကCoca-cola Myanmar တို့ရဲ့ ဝန်ထမ်း ရွေးချယ် စီမံမှု၊ ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည် ပျိုးထောင်မှု အစရှိတဲ့ ကဏ္ဍများမှာလည်း ဦးစီးဆောင်ရွက်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်များရဲ့ စွမ်းရည်မြှင့်တင်မှုက တဆင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းကို အကျိုးပြုနိုင်စေဖို့ ဆန္ဒထက်သန်ပြီး ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တိုးတက်မှု ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများ ပို့ချပေးနေသူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Co-Founder (GeekHub MM)
ကိုဝဏ္ဏဆွေ ဟာ GeekHub MM ရဲ့ Co-founder တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ Telenor Myanmar အပြင် အခြား နိုင်ငံတကာ အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီများမှာ ပရောဂျက် စီမံသူနဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင် အဖြစ် ၁၀နှစ်ကျော်ကြာ အတွေ့အကြုံရှိထားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နိုငျငံတကာ လုပျငနျးကုမ်ပဏီမြားမှာ အလုပျဝငျခွငျး - empowered by Wynee’s Human Library Series
နာမညျကွီး နိုငျငံတကာ ကုမ်ပဏီကွီးတှမှော အလုပျလုပျရတာ ဘယျလိုနမေလဲ တှေးကွညျ့ဖူးပါသလား?
ခေါငျးဆောငျမှုနရော ရောကျလာဖို့ ဘယျလို အရညျအသှေးတှေ ပြိုးထောငျဖို့လိုမလဲ သိခငျြပါသလား?
MNC တှမှော လကျရှိ ဝငျရောကျလုပျကိုငျနတေဲ့ ခေါငျးဆောငျတှေ၊ ပရျောဖကျရှငျနယျတှနေဲ့ လူခငျြးတှေ့ ဆှေးနှေးဖလှယျပွီး အိုငျဒီယာတှေ၊ အလုပျအကိုငျ အကွံပွုခကျြတှေ ရရှိနိုငျဖို့ ၊ MNCကုမ်ပဏီတှေ ဝနျထမျးချေါပုံ၊ ဝနျထမျးလကေ့ငျြ့ပုံတှေ အကွောငျး သိနိုငျဖို့ ဝိုငျး ရဲ့ Human Library မှာ ပါဝငျလိုကျပါ။
Human Library ဆိုတာ ဘာလဲ?
Human Library ဆိုတာ မွနျမာလူငယျမြား (Readers/စာဖတျသူမြား) အတှကျ Community မှ ခေါငျးဆောငျမြား။ အသိပညာရှငျ အတတျပညာရှငျမြား (Books/စာအုပျမြား)နှငျ့ ရငျးရငျးနှီးနှီးတှဆေုံ့ ဆှေးနှေးခှငျ့ ရှိမညျ့ နရောတဈခုပဲဖွဈပါတယျ။
သမရိုးကြ ဟောပွောပှဲ ပုံစံမြိုး မဟုတျပဲ speaker တှနေဲ့ တကျရောကျသူတှေ တိုကျရိုကျ မေးမွနျး ဆှေးနှေးရမဲ့ အစီအစဉျ ဖွဈပွီး လူဦးရေ ကနျ့သတျခကျြ ထားရှိတာမို့ Registration Link https://bit.ly/2Fn8HlY ကနေ တကျရောကျဖို့ အမွနျဆုံး စာရငျးပေးသှငျး လြှောကျထားနိုငျပါတယျ။
Human Library မှာ ပါဝငျနိုငျဖို့ Registration Link https://bit.ly/2Fn8HlY ကနေ စာရငျးသှငျးလိုကျပါ။ ဒီပှဲအတှကျ ဝငျကွေး တစုံတရာ ကောကျခံခွငျးမရှိပါ။
နရေ့ကျ - ၁.၁၂.၂၀၁၈ (စနနေေ့)
အခြိနျ - နံနကျ ၁၀နာရီ မှ ၁၂နာရီ
ပှဲနရော - Myanmar Metropolitan College
Paul Nyan Myint Soe က Unilever EAC Myanmar Company Limited မှာ Senior HR Business Manager အဖွဈလုပျကိုငျလကျြရှိပါတယျ။ ဒီလို Human Resource Management နယျပယျမှာ အလုပျမလုပျခငျ Samsung နဲ့ Telenor စတဲ့ ဆကျသှယျရေးနဲ့နညျးပညာကုမ်ပဏီတှမှောလဲ အလုပျလုပျခဲ့ပါတယျ။ ပထမဆုံးဘှဲ့ကို ရနျကုနျတက်ကသိုလျကနရေရှိခဲ့ပွီး Public Administration (မဟာဘှဲ့) ကို ရနျကုနျစီးပှားတက်ကသိုလျက ရရှိခဲ့ပါတယျ။
ပထမဦးဆုံး Paul Nyan Myint Soe က မိသားစုစီးပှားရေးလုပျငနျးကို တှဲဖကျစီမံရငျးကတဈဆငျ့ စီမံခနျ့ခှဲမှုအရညျအခငျြးတှကေို ပြိုးထောငျခဲ့ပါတယျ။ ထို့နောကျ INGO ကို ဝငျရောကျခဲ့ပွီး အဖှဲ့အစညျးနဲ့လုပျငနျးဆောငျရှကျရာမှာ ရှိတတျတဲ့ ဘာသဘာဝနဲ့ မတူညီတဲ့လူတှနေဲ့ဆကျဆံရတဲ့အခါ လိုအပျတဲ့နညျးလမျးတှကေို လလေ့ာခဲ့ပါတယျ။ လူတှကေိုစိတျဝငျစားပွီး အသိုကျအဝနျးတဈခုမှာ နရေတာကို နှဈခွိုကျလို့ပဲ HR Management ကို အလုပျအကိုငျတဈခုအနနေဲ့ ရှေးခယျြဖွဈခဲ့ပါတယျ။ UN မှာအလုပျလုပျနရေငျး HRM နယျပယျမှာ ခွလှေမျးစခဲ့တာဖွဈပွီး Non-profit organization တှမှော လုပျငနျးအတှအေ့ကွုံက ၁၀နှဈကြျောရှိခဲ့ပါတယျ။
Non-profit အပိုငျးမှာ ၁၃ နှဈကွာ ကြျောဖွတျလာပွီးနောကျ HRM နဲ့သကျဆိုငျတဲ့ အသိပညာဗဟုသုတတှေ၊ အတှအေ့ကွုံတှကေိုအသုံးခဖြို့၊ ပိုပွီးကယျြဝနျးတဲ့ HRM networkရဖို့ စီးပှားရေးနယျပယျဘကျကို ပွောငျးခဲ့ပါတယျ။
Paul Nyan Myint Soe ကသူ့ရဲ့ HR အတှအေ့ကွုံတှနေဲ့ အခု HR နညျးဗြူဟာခခြွငျး၊ အကွံပေးခွငျး၊ တခွား stakeholder တှနေဲ့ ပူးပေါငျးခွငျးတှကေို ဆောငျရှကျလကျြရှိပွီး သူအလုပျလုပျနတေဲ့ organization ကို အကြိုးမြားစှာ ယူဆောငျလာနိုငျတဲ့သူတဈဦး ဖွဈပါတယျ။
'ဝိုငျး' ရဲ့ Human Library မှာ ပါဝငျဆှေးနှေးပေးမဲ့ နောကျထပျ Speaker တဈဦးကတော့ Grab မှာ Strategic Sourcing and Procurement Professional အဖွဈ လုပျကိုငျနသေူ ကိုလူမငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရောဂကျြ အကောငျအထညျဖျောခွငျး၊ နညျးဗြုဟာမွောကျ ဝယျယူမှုမြား လုပျဆောငျခွငျး၊ ငှကွေေး စီမံမှု၊ လူထု ဆကျဆံရေး အပါအဝငျ လုပျငနျးကဏ်ဍမြားစှာကို ကြှမျးကငျြသူ တဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။ Grab မှာ မလုပျကိုငျခငျ UNAIDS၊ Destination Asai ၊ Telenor Myanmar တို့မှာလညျး အတှအေ့ကွုံ မြားစှာ ရှိထားသူ တဈဦးပါ။ ရနျကုနျအဝေးသငျ တက်ကသိုလျ၊Center for Vocational Training (CVT) တို့မှာ ပညာသငျကွားခဲ့တဲ့ အပွငျ KV Zürich Business School (Switzerland) မှ Advanced SME Development/Management အသိအမှတျပွု လကျမှတျလဲရရှိထားပါတယျ။
ဝိုငျး ရဲ့ Human Library မှာ ပါဝငျဆှေးနှေး ပေးမယျ့ နောကျထပျ Speaker တဈဦးကတော့ နိုငျငံတကာ လုပျငနျးစု Alibabaမှာ အပါအဝငျဖွဈတဲ့ Shop.com.mm ရဲ့ HR Director အဖွဈလုပျကိုငျနသေူ မရညျမှနျ ဖွဈပါတယျ။ ယခငျက Digicel Myanmar ၊ Ooredoo Myanmar နဲ့ကCoca-cola Myanmar တို့ရဲ့ ဝနျထမျး ရှေးခယျြ စီမံမှု၊ ခေါငျးဆောငျမှုစှမျးရညျ ပြိုးထောငျမှု အစရှိတဲ့ ကဏ်ဍမြားမှာလညျး ဦးစီးဆောငျရှကျခဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။ လူငယျမြားရဲ့ စှမျးရညျမွှငျ့တငျမှုက တဆငျ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လူမှုအဖှဲ့အစညျးကို အကြိုးပွုနိုငျစဖေို့ ဆန်ဒထကျသနျပွီး ကိုယျရညျကိုယျသှေး တိုးတကျမှု ဆိုငျရာ လကေ့ငျြ့သငျကွားမှုမြား ပို့ခပြေးနသေူ တဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။
ကိုဝဏ်ဏဆှေ ဟာ GeekHub MM ရဲ့ Co-founder တဈဦးဖွဈပါတယျ။ Telenor Myanmar အပွငျ အခွား နိုငျငံတကာ အခွစေိုကျ ကုမ်ပဏီမြားမှာ ပရောဂကျြ စီမံသူနဲ့ ဆော့ဖျဝဲ ကြှမျးကငျြ ပညာရှငျ အဖွဈ ၁၀နှဈကြျောကွာ အတှအေ့ကွုံရှိထားသူလညျး ဖွဈပါတယျ။
*** Previous Human Library Series Wynee organized ***
First Human Library (Aug '17)
Human Library : Tourism and Hospitality (Aug '18)
Working at Multinational Corporations (MNCs) – empowered by Wynee’s Human Library Series
Have you ever wondered what it takes to work atarenowned MNC?
What skills do you need to nurture to navigate yourself toaleadership position?
Learn howaMNC recruit, capture skills and manage talents from leading professionals working at MNCS.
Join Wynee’s Human Library on MNCs to engage in an in-person discussion with leading professionals in the industry for ideas, and career inspiritions and guidance on howaMNC recruit, capture skills and manage talents!
Human Library isaplace for Myanmar youth (readers) to interact with professionals / community leaders (books). The event aims to encourage interaction between readers and books.
To participate asareader, you register by 30 Nov (Friday).
Venue: Myanmar Metropolitan College
( No. 232, 7th Floor, Bargayar Street, Myay Ni Gone, Sanchaung Township, Yangon, Myanmar | www.yourmmc.com )
Since the event theme is in small-group discussions with the speakers, seats are limited. We encourage you to register your attendance as soon as possible to secure your seat at https://bit.ly/2Fn8HlY
Paul Nyan Myint Soe@Paul isaSenior HR Business Partner Manager at Unilever EAC Myanmar Company Limited. Before dedicating his service to Unilever, he worked at the managerial level in HRM field in well-known hi-tech companies: Samsung and Telenor. He obtained Masters of Public Administration from the Yangon Institute of Economics ten years after he received his first degree from the University of Yangon.
Paul nurtured his managerial skills by co-leading in his family business in early days. Then, he joined an INGO to learn organizational way of working and the way of dealing people with diverse culture background. His interest and passion in people and love of living in society drive him to choose Human Resources Management as his career. He started his career in HRM field during his tenure at UN and he has over 10 years HRM experiences in non-profit organizations includingaforeign Govt. Agency.
After working 13 years in the non-profit sector, he decided to move into business sector for contributing his knowledge and expertise and for expending his HRM network. Passionate about the HRM, the move from development assistance field to the business sector wasanatural fit for him. With his broad HRM portfolio, he continues working in delivering HR strategy, consultation and partnering with different stakeholders to contribute the success of an organization where he will be.
Lu Min is originally from the most crowded city of Myanmar, Yangon.
He is an expert in different fields of project implementation, strategic sourcing and procurement, financial planning, community relations, program development, tourism & event management, customer services, operations and administrations. Then, he isacertified trainer at training facilitation.
His first degree was the Bachelor of Arts, specialization in History from Yangon University of Distance Education (YUDE). Then he successfully completed the learning of profession in Commercial Assistant based on the model of Switzerland for3years at the Center for Vocational Training (CVT), Myanmar. And, he has been certified for the Advanced SME Development/Management Courses by the career enhancement program of KV Zürich Business School (Switzerland).
He is currently working for the Grab Country Office, Myanmar. Before joining Grab, he has worked at organisations including UNAIDS, Destination Asia and Telenor Myanmar.
Yee Mon isapassionate and result-focused HR Professional equipped with demonstrated experience in managing full spectrum of Human Resources with key specialization in Organization & Talent Development.
Yee Mon worked as the National Human Resources Manager with “Digicel Myanmar”, Organization Development Senior Manager with “Ooredoo Myanmar”, and led Organization Development & Learning department at Coca-cola Myanmar before she finally joined Shop (a member of Alibaba Group) as “HR Director”. In all the roles she had taken, she has the extensive experience of setting up the Human Resources system in the areas of Talent Acquisition, Talent Development, Performance & Talent Management and Employee Engagement in order to position talent and leadership as competitive advantage of the organization.
She is extremely passionate about facilitating learning and growth of individuals, especially youth. She believes investment in youth development and empowering youth to do good for themselves and the society will help createabrighter future for Myanmar community.
Co-Founder of GeekHub MM is passionate strategic consultant who has holistic view of technical, commercial and strategic aspects with rich knowledge, experiences snd dedication. Also, excellent project manager, trainer, communicator and leader with "can do" attitude. He hold Bachelor of Computer Science Degree. He has more than 10 years of working experiences software analyst, team lead, project manager and strategic sourcing manager in local as well as MNCs, including Telenor Myanmar.